We Fight We Win. -- " More than Media ": ဒါတွေကို ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။
စစ်အုပ်စုဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိင်ငံခြားကိုထွက်တဲ့အချိန်မှာ အခြေအနေဆိုးတွေကို စတင်ဖန်တီး ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြတယ်။
မူစလင်အယောင်ဆောင်ထားသောကြံ့ဖွတ်များ နဲ့ဘုန်းကြီးအသွင်ဆောင်ထားသော ကြံ့ဖွတ်များ စတင်တင် တိုက်ခိုက်ဟန် ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။
မူစလင် ဈေးဆိုင်တွေကို စတင်တိုက်ခိုက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
၁- မူစလင်များနှင့် မြန်မာ များ အချင်းအချင်း ကြိုတင်ဆွေးနွေးထားကြရန် ၊ မူစလင်နှင့်ဗုဒဘာသ၀င်များ အချင်းအချင်းအပြန်လှန်ကူညီစောင့်ရှောက်ရန်၊ကာကွယ်ပေးကြရန်။
၂- ကျေးရွာရပ်ကွက်အလိုက် ဗုဒဘာသာဝင်များနှင့်မူစလင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ကို ကြိုတင် ဖွဲ့ စည်းထားကြရန် ။
၃- အခြေနေဆိုးလာပါက ဗုဒဘာသာဝင်များနှင့်မူစလင်များ ပူးပေါင်းပြီး စစ်အုပ်စု ကို ပြစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။
၅- အပြစ်ခတ်ရပ်စဲရေးပြုလုပ်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားများက ဒုက္ခသည်များကို အစွမ်းကုန်ကူညီပေးရန်၊ လူမျိုးရေးဘာသာရေး တို်က်ခိုက်မှုများ မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ပေးသင့်ပါတယ်။
၆- ၈၈ မဖြစ်မှီ ဗုဒဘာသာနှင့်မူစလင်အဓိကရုဏ်သခန်းကို ၈၈ မျိုးဆက်များ က ထိမ်းသိမ်းပြီး
စစ်အာဏာရှင်ဆန်ကျင်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုကြီး ဆီသို့ဦးတည်သွားနိင်တဲ့ သေနင်္ဂဗျုဟာ
Rohingya are very black skin, how can ကြံ့ဖွတ် pretend as Rohingya? appearances are very different included have the beard etc, races are totally different, anyone will notice that if they do.
မူစလင် do these with their own wills, free minds and consent no body need to pretend riots on behalf of them, nobody need to force them to do, that their habit they do that, even in whole world they do that, even in their own မူစလင် countries. How can ကြံ့ဖွတ် be in other countries when they do violent?
စောက်ရူးမိုးသီးဇွန် ဖြုတ်ဦးနှောက် မင်းက ကုလားလား
ဘယ်သူတောင်းစားက ရွှေညာဏ်တော်စူး ရောက်ပြီးတော့ရေးထားတာလဲ.အဆင်အခြင်မဲ့ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ အတွေးမခေါ်တွေ ဒီလိုရေးတာ ရှက်ဘို့ကောင်းပါတယ်. ဒီလိုလူမျိုး တွေကြောင့်လဲ တိုင်းပြည်က ပိုဆိုးနေ တာ..Little Knowledge is more dangerous than no knowledge.
I cann't understand.Why you said like this?Are you crazy.You should fucking go and live in syria.We cann't built in Pagoda in any other musilim country.Our country already allown open type than any other country.You live in state,you only shout from there because you afraid to go back.If you are really brave you should go back and do like this Ko Min Ko Naing and Ko Ko Gyi.You arearubbish body i ever seen after U Saw.
13 June 2012 at 01:25
fuck u moe thee,lee bal min ko
13 June 2012 at 03:58